Shenzhen Kactus Isisetshenziswa somdlalo Co., Ltd yasungulwa ngo 2012, e Shenzhen, Guangdong, China.
Thina ubunjiniyela, ukukhiqiza futhi adayise ukusebenza ibhayisikili izesekeli, futhi ahlinzeke izinsizakalo olufanele kusuka design ehambisana OEM / ODM, Wholesales, imikhumbi yamazwe ngamazwe ukuba nangemva-ukudayiswa ukwesekwa.
Ngosizo lomhlaba wethu R & D Ithimba, thina Kactus Tech ungumnikazi eziningana patent cutting edge namadizayini nokuphathelene, kanye esihle izinga, ukusebenza, induduzo kanye nokuphepha imikhiqizo yethu, thina wehluke emakethe mncintiswano womhlaba wonke. Amakhasimende ethu avela emhlabeni wonke, futhi sikhonza njengabadala OEM efektri ezinye ibhayisikili futhi isikeyiti ibhodi abakhiqizi kunazo owaziwa.
Kactus Ezemidlalo ungumnikazi 17 CNC machining Izikhumulo, 8 digital CNC lathes, imishini 2 inhlansi, imishini 8 yokugaya, 6 umjovo udini imishini, namanye amathuluzi amaningana imishini elisizayo ukuhlolwa.
Nge ukuphathwa uhlelo lwethu yesimanje, ochwepheshe professional, eziphambili imishini ukukhiqizwa, on Kwenzekani emisha kanye nezimo ukuze emakethe nasezidingweni ezishintshashintshayo, manje kungcono nokuzinikezela kwethu ukwenza, amakhasimende ethu ngezinga elamukelekayo.
Uma sibheka phambili ngokufaka ibhizinisi nawe!